आफुले चाहेकाे कुरा कसरी प्राप्त गर्ने ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
हामी सबैमा केही प्राप्त गर्ने चाह हुन्छ । हामी जिवनमा केही बन्छाैँ, या केही गर्छाैँ भनेर लागीरहेका हुन्छाैँ । तर हामी मध्ये धेरैजसाेकाे त्याे सपना केवल सपना नै रहने गर्छ ।
आफुले चाहेकाे कुरा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
अरूले गर भनेर गर्नु, अरूबाट प्रेरित भएर गर्नु क्षणिक बन्छ । त्यस्ताे अवस्थामा जब तिमीलाइ थकाइ लाग्छ। तिमीले त्याे काम नै छाेडिदिन्छाैँ । तिमीमा त्याे कुरा प्राप्त गर्ने चाह मरेर जान्छ । त्यसैले केही प्राप्त गर्नु छ भने आफु भित्रैबाट प्रेरित हुनुपर्छ । त्याे कुरा प्राप्त गरिछाड्ने दृण सँकल्प हुनुपर्छ ।
यस्ताे अवस्थामा तिमीले जस्ताेसुकै बाधा आएता पनि त्याे बाधाकाे सामाना गर्छाैँ र आफुले चाहेकाे कुरा प्राप्त गरिछाड्छाैँ । आफुले चाहेकाे कुरा के हाे, त्यसकाे लागी के-के त्याग गर्नुपर्छ र त्याे प्राप्त गरिसकेपछी जिवनमा कस्ताे परिवर्तन आउँनेछ स्पष्ट हाेउ । यदि तिमी पुर्व तयारी बिना, कुनै जानकारी नलिइ त्याे कुराकाे पछाडी लाग्छाैँ भने बिचमै बाटाे माेड्नुपर्ने परिस्थीती आउँन सक्छ ।
आफुले प्राप्त गर्न चाहेकाे कुरा, त्यहाँसम्म पुग्न बनाएका याेजना डायरीमा लेख । ठुला ठुला याेजनालाइ साना-साना याेजनामा बाँड । ती याेजना पुरा गर्नकाे लागी तिमीले दिनभरीमा के काम गर्याैँ, बेलुका डायरीमा लेख । यसले गर्दा आफ्नाे लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित भइराख्छ र प्रयास गर्नकाे लागी प्रेरित भइन्छ ।
याेजनाहरू कहिले सफल हुन्छन्, त कहिले असफल । तिमी सफलता र असफलता गनेर नबस । तिमी हिजाे कहाँ थियाैँ र आज काहाँ छाैँ ? हिजाे तिम्राे ज्ञान कति थियाे र आज कति छ ? याे यात्रामा तिमीले के सिक्याैँ ? कति परिपक्क बन्याैँ ? भन्रे कुराहरूलाइ हेर । सबैलाइ खुसी पर्छु भन्रे साेच छाेड । तिमीले जतिसुकै खुसि बनाउन खोजे पनि, सबैलाई खुसि पार्न कहिल्यै सक्दैनौ ।
र, जति पनि मानिसहरु छन्, ति केवल तिम्रो जीवनको हिस्सा मात्र हुन् । मुख्य पात्र त तिमि हौ । आफुलाई प्राथमिकतामा राख । आलोचनाबाट डराउने, मानिसलाई स्पष्टिकरण दिदै हिड्ने गर्दा तिमीले आफ्नो समय खेर फालीरहेका छौ र सगै आफुमा नकारात्मक सोचलाई पनि निम्तो दिईरहेका छौ । त्यो समय र शक्ति आफ्नो काममा, आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो कल्पनामा लगाउ ।
पुंजी भनेको पैसा मात्र होइन, आत्मविश्वास र आइडिया पनि हो । पैसा नहुदा तिमीले आफुले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न झट्ट सक्दैनौ होला । तर तिमीले तिम्रो आइडिया र आत्मबिश्वाले त्यसको लागी आधार निर्माण गर्न सक्छौ । त्यसैले आफ्नो पृष्ठभूमिलाइ दोष दिएर नबस । आफुसंग भएको स्रोतको सक्दो उपयोग गरेर काम सुरु गरिहाल ।
कुनैपनि काममा कसरी सफलता प्राप्त हुन्छ ?
हामी दिनभर जे गर्छौ, जति गर्छौ, जसरी गर्छौ, त्यसको लक्ष्य के होला ? हामी के गरिरहेका छौं ? किन गरिरहेका छौं ? कसरी गरिरहेका छौं ? कसका लागि गरिरहेका छौं ? वास्तवमा हामी त्यही काम गरिरहेका छौं, जो हाम्रो जीवनको आवश्यक्ता हो । हामी त्यसरी नै गरिरहेका छौं, जस्तो हाम्रो ढंग पुग्छ ।
सफलता । आफैमा सुन्दर शब्दावली हो । तर, सफलता प्राप्त गर्नका लागि समूचित मिहनेत, लगाव, श्रम, इच्छाशक्ति, निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । खप्तड स्वामीले सफलताको सूत्र यसरी बताएका थिए, ‘आत्माविश्वास, लगनसिलता र निरन्तर प्रयास ।’ सफलताको लागि लक्ष्य पहिलो कुरा हो । कुनैपनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्य बनाउनुपर्छ ।
उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्थक प्रयास आवश्यक हुन्छ । हामी सफलताका लागि मरिमेट्छौं । अथाह श्रम गर्छौ । तर, लक्ष्य प्राप्त भएको हुँदैन । किनभने कहिले काहिँ हामी निरर्थक प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छौं । लक्षित सफलता हासिल गर्नका लागि सार्थक प्रयास आवश्यक हुन्छ । कुनैपनि काममा सोचेजस्तो सहजै सफलता प्राप्त नहुन सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा विचलित हुने होइन । बरु निरन्तर ढटिरहनुपर्छ । निरन्तरको प्रयासले जो कोहि, सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् । श्रमको कुनै विकल्प छैन । श्रमविना सफलताको कल्पना गर्नु बेकार छ । बलिउड अभिनेताले भन्ने गरेका छन्, ‘श्रम नै हरेक समस्याको समाधान हो ।’ श्रम गर्नुपर्छ । श्रमले हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ ।
सफलता र असफलताको प्रसंगमा हामी भाग्यमा निर्भर हुन्छौं । कुनैपनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुलाई हामी भाग्य मान्छौं । तर, खप्तड स्वामीले नै भनेका छन्, ‘दृढ विचार भएको मानिसको अधिनमा भाग्य हुन्छ ।’ वास्तवमा हामी भाग्यमा बढी निर्भर रहन्छौं । कुनैपनि सफलता प्राप्त गर्नु वा नगर्नुलाई हामी ‘भाग्यको खेल’ भन्छौं ।
जबकी हाम्रो पूर्खाहरुले भन्दै आएका छन्, ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर हुँदैन ।’ अर्थात भाग्यमा छ भन्दैमा विना प्रयास वा श्रम त्यो प्राप्त हुँदैन । त्यसैले भाग्यमा निर्भर भएर निस्क्रिय बस्नु आफैमा मूर्खता हो । हो, कुनैपनि काम गरेपछि त्यसमा आशावादी हुनुपर्छ । त्यसप्रति उत्सुक हुनुपर्छ । यसले हाम्रो जीवनलाई उत्साह दिइरहन्छ ।
एक पेय पर्दाको विज्ञापनमा भन्छ, ‘डर के आगे जित है ।’ हामीले जब डरलाई जित्छौं, सफलताको सिंढी चढ्न सक्छौं । डरले मनमा हिनतावोध पैदा गर्छ । त्यही हीन भावनाले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि अवरोध गर्छ । हामी आफुले आफैलाई हेला गर्छौ, हामीले आफुले आफैलाई नजरअन्दाज गर्छौ । म को हुँ, मेरो क्षमता के हो, मैले के गर्नुपर्छ भनेर मनन गर्दैनौं ।
चिन्तन गर्दैनौं । त्यही कारण हामी अलमलिइरहेका हुन्छौं । अतः आफ्नो क्षमताको पहिचान गरेर सोहि अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । संसारमा त्यही व्यक्तिले सफलता प्राप्त गरेका छन्, त्यही व्यक्तिले प्रशिद्धि कमाएका छन्, जसले हिम्मत गरेका छन् । जसले डरलाई जितेका छन् ।
हामी धेरै वाहानाबाजी गछौर्ं । कुनै झन्झटबाट छुटकारा पाउनका लागि बाहाना बनाउँछौं । कुनै कामबाट छलिएर भाग्नका लागि बाहाना बनाउँछौं । जब कसैले हामीलाई कुनै जिम्मेवारी बोकाउँछ, त्यसबाट उम्कनका लागि हामी अनेक बाहाना खोज्छौं । यस्तो वाहानाबाजी गर्ने प्रवृत्ति हामीभित्र कति गहिरोसँग गढिएर रहेको छ भने, हामी स्वंम आफैबाट लुक्नपनि बाहाना गर्छौं ।
जस्तो कि, बिहान उठेर मर्निङ वाक गर्न मन लागेन भने हामी त्यसको बाहाना खोज्छौं । नुहाउन अल्छी लाग्यो भने बाहाना खोज्छौं । बाहानाले हामीलाई क्षणिक रुपमा कुनै झन्झटबाट मुक्त गराउँछ । तर, यो डरलाग्दो रोग हो । यो बाधक हो । बाहानाले हामीलाई सधै पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले सफलता प्राप्तका लागि बाहानाबाजी छाडौं ।
हामीलाई आफु सर्वगुणी, सर्बज्ञाता लाग्छ । हामीले हरेक कुरामा तर्क गर्न तत्पर हुन्छौं । जुनसुकै कुरामा पनि पूर्व निर्धारित बिचार लाद्छौं । हामी बोल्छौं । भन्छौं । सुनाउँछौं । तर, हामी आफै भने सुन्दैनौं । बुझ्ने धैर्यता राख्दैनौं । महान बैज्ञानिक स्टिफल हकिङ्गले भनेका छन्, ‘म केवल बच्चा हुँ, जो कहिल्यै ठूलो हुँदैन । म अहिले पनि कसरी, किन भन्ने प्रश्न गरिरहेका हुन्छु ।’ वास्तवमा बच्चाले जस्तै हरेक कुरामा जिज्ञासा र चासो राख्नुपर्छ । सर्वज्ञाता भएर अरुको कुरा नसुन्ने, नबुझ्ने प्रवृत्तिले हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्छ ।
Don't Miss it दिमागलाई नकारात्मक सोचबाट टाढा राख्नको लागी अपनाउनुहाेस् यी उपायहरू
Up Next कस्ताे हुन्छ लगनशील व्याक्ति ? जान्रुहाेस्